Suldaan C/llahi Max'ud Suldaan C/salaan (bidix) iyo Caaqil Axmed Cabdi Madoobe (midig) oo ka hadlay hadalkii Ra'iisul wasaare geedi ee la xiriirey Midnimada Soomaaliya ka Dhegeyso halkan
Fahadow: Geeddi ma Zenaawi baa Eryi Kara Mise Cabdillaahi Yuusuf?
Aragtidii Dadweynaha SOOL, SANAAG, & BUUHOODLE ee Sannadkii 2001...
KA AKHRI HALKAN... GUJI....
XASUUQII WAGALA :: Sannadkii 1984 waxaa magaalada Wajir lagu xasuuqay in ka badan 400 oo nin oo Soomaali ah.. (Tiradaas waxaa taariikhyahanadu gaarsiiyaan in ay ahayd 2000 oo qof oo la xasuuqay). Xasuuqyada kale ee Kenya u geystey dadka ay gumeysato waxaa kamid ah Xasuuqyadii: Malkamari ee 1976, Garissa ee 1980, Madogashe ee 1982, Bagala ee 1998.. EEG HALKAN
Waxaan u malaynayaa in aan maanta muran ka taagnayn, in soomaali meel kastooy joogto ay u gacan gashay taliska ka arrimiya Addis-ababa, ee uu garwadeenka ka yahay Meles Zenawi.Horaan u iri gabaladaii soomaaliya badi gacanta ayuu ku soo dhigaye tolow Muqdisho manoogu imaanayaa Ato- Meles Zenawi. Nasiib darro waxuu hadda Meles noo soo fariistay kaabiga oo Jawhar isagaa ka taliya, Muqdishana wakiilo yaryar aanse taaba qaadin ayaa u fadhiya, har iyo habeena ku qarwa in maruun noo yimaado xukunka Ato Meles Zenawi.
Ayaamahan waxaa dad badan ka argagaxeen hadalkii uu yiri Mr.Geedi ee ahaa: "Haddii la aqoonsado Somaliland waxba kama qabno". Dad badan ayaa qaylo afka shubtay oo yiri waa in xukunka la qaada Geeddi. Dadkaas waxaa ka mid ahaa Saaxiibka wayn ee Fahad Yaasiin oo waliba codsi uu qortay Cabdillaahi Yuusuf; uu kaga dalbanayo inuu shaqada ka tuuro Geeddi. waxaanse la yaabay Fahad oo xaaladda Soomaaliya war u haya iyo waliba waxa lagu soo dhoodhoobay Embgathi goob joogna uu u ahaa wixii meeshaas lagu unkay.iyadoo qoladii lagu aas-aasay Nasaret ee loo yiqiin SRRC, loo bedelay magacii looguna wanqalay magac dawaladeed.
Walaal Fahad ma u malaynaysaa cabdillaahi iyo Geedi inay ku yimaadeen rabitaanka ummadda soomaaliyeed, mise kula tahay in ay yihiin niman xor ah oo ka madax banaan awaamiirta Melez zenawi. Sow shalayto markii lawaraysanayy Cabdillahi Yussuf kii lahaa ma-ahayn: Melez Zenwi iyo xukunka itoobiya Cadow ma-aha ee cadow waxaa aha soomaalida iyo kuwa garka dheer. Sidoo kale, ma umalaynaysaa in Geedi uu iska yiri hadalkii cuslaa ee qeexayay kala gogooynta soomaaliya. Waxaad ku seexataa in Geeddi la yiri raac waddadaas hana ka hor imaan, Cabdilaahina la ogayahy waxaas iyo wax kasii darran, iyagoo ay kala wayntahay magacaas baas ee loogu yeerayo ee ah madexweyne iyo ra-iisalwasaare.
Madexweyne waxaa Cabdillaahi Yuusf ugu yeera Itoobiya iyo saxaafadda soomaalida, laakiin haddaad eegto saxaafadda caalamka waxay ugu yeeraan" Ethiopian backed Prisedent". Intaas ayaa kaaga filan nuxurka dawladda aan sheegsheegayno, oo wali lama arag dawlad maqaar saar uah dalk kale oo taabba gasha.
Hadalkii Geeddi uu yiri waxuu galaya diiwaanada waawayn ee lagu xisaabtamo. Xagga adduunka garowshiiyo wayn ayuu siinayaa kuwa ku haminayay in la qayb-qaybiyo dhulka soomoalida, waayo waxaa la leeyahay kuwii ku dhegganaa ee looga gabanayay haddii ayna waxba ka qabin maxaan innagu u hortaagan nahay. Maanta miisaska UN-ka iyo Au-da waxaa yaal falanqayn wayn oo ku saabsan dabacsanaabta ay ku dhawaaqeen kooxda Jawhar. Xagga soomaalida waxuu galayaa taariikh madow oo jiilalka dambe la odhan doono kooxdii ugu horaysay ee ku dhawaaqda inkiraadda qoomiyadda soomaaliyeed banaysana in xaq tahay in la gumaysto lana kala qoqobo intii xorowday.
Haddii nin masuul sheeganaya uu afkiisa kasoo baxo hadal aan u cuntamin dadwaynaha amase caalamka, hadal burinayana aayna kasoo yeerin masuul kasareeya muddo 48 saac, hadalkaasi wuu hirgalaa waxaana lagula xisaabtamaa maamulkaas oo dhan. waxaan u malaynayaa in laga joog maalintii uu Geedi ku dhawaaqay dullaynta ummadda soomaaliyeed 6 maalmood, wax ka hadlay oo buriyay warkiisana ma- hayno. Sidaas daraadeed wuxuu noqonaya mid kuu yaal ee ku xisaabtan.
Dadku masinna ee waxaa xussid mudan qofkii u horeeyay ee naqdiya hadalkaas, isla markaana qiyaamo qaran ku tilmaamay waa garyaqaan Xasan Dhimbil oo xildhibaan ka ah Wixii lagu soo unkay Embgathi. Dhimbil waa qofkii u horeeyay ee isku kalsoonaada kana hibaysan Itoobiya iyo inta moodda inuu Meles wax ka dhigi kar, halka Cismaan Caato uu ka gaabsday oo afka xirtay marlii la waydiiyayna ka baqay inuu wax ka yiraahdo.
Ingiriisi: Toddobaadkii hore markii bamku kugula qarxay Muqdisho, dowladdaadu dhowr af bay ku kala hadashay. Dadka loo maleynayo inay ka dambeeyeen qaraxaas, Madaxweynuhu si kale ayuu uga hadlay, adigu si kale ayaad uga hadashay, Wasiiru dowlahaaguna wuxuu sheegay inay ka dambeeyaan Maxaakiimta. Miyaanay dowladdu hal af ku wada hadal?
Geeddi waraysigii uu bixiyay waxuu dadka baray wuxuu yahay, wuxuu is jeclaysiiya aduunyo, waxuu ka leexday xaqa iyo awaamiirta Eebbe. Markii loo bandhigay aayadaha quraanka waxuu ku xanaaqay wariyihii isagoo dhibsanaya dalaaisha Eebbe kuna doodaya in meel kale mowjadda loo leexiyo. Geeddi waxuu soo qufay siro duugan oo taxan dheresanna min hubka kasoo degaya Bebera ilaa Addis-ababa, kuna soo afjarmaya Jawhar gacmo hoosena la isdhaafsaday, kaasoo kartadiisa uu dhigayo Meles Zenawi. Kaartadaasi waxaa laabta loogu qaboojinaya Hargaysa laguna leeyahay waxaan idinka qaboojiyay mintidkii midnimada koofura,anna (Meles haddan ahay) anaa iska leh Dekadda Berbera,waxna laima waydiin karo. Kooxda Jawhar kuwa idin neceb ee idinka soo horjeeda ayaan idnka qaban xukunkana idinkaa haysan koofur ee ku ekaada halkaas, dadka i neceb ee wadaniyiinta ahna soo laaya.
1987kii markii waddanka Kenya uu sida xun u tarxiilayay soomaali badan oo degganayd wadankaas , hantidii dadkaasna la dhacay ayaa Wasiirkii Ganacsiga waagaas oo ahaa Cabdi qaasin Salaad Xasan waxuu yiri: Kenya soomaalida waxay ula dhaqmaysaa sida Yuhuuddu ula dhaqanto Falastiin". Dawladdii Siyaad Barre oo aan waagaas doonayn inay isku soo jeediso Kenya ayaa in ka yar 24 saac ku burisay hadalkiisii tirina: waa hadal isaga u gaar aha mana matalo dalka soomaliya( Ogow booqasho dawlladeed ayuu ku joogay markaas Nayrobi). Hadalkaas la burinayana waxuu ahaa mid qoomiyadda soomaaliyeed u hiilinayay laakiin dawladdu si ay u xajiso xiriirkii Kenya waxaa buriyay raisalwasaare ku xigeenkii ahaana wasiirka arrimaha dibadda Cabdiraxmaan Jaamac Barre. Maanta Cabdillaahi Yuusuf oo haddii uu ka dhiidhiyi lahaa hadalkii Geeddi geli lahaa diiwaanka taarikhda mutaysanna lahaa in loo aqoonsado geesi dalkiisa iyo dadkiisa Jecel ayaa asbuuc dhan ka aamusan oo bustaha Meles Senawi ku huwan Jawhar.
Saaxiibkay Fahadow Maanta Qabri dahare ayaa waayamihii Tigregu ku xasuuqeen maatadii soomaaliyeed ee gacanta gumaysgii tii u xumayd xilligan ku jira. Hore wax cambaareeya ayaan xitaa maqli jirnay laakiin bedelkeedii Kuwa awaamiirtooda fuliya ayaa magaceenii ku fariistay, ee sidaa uga qanac codsigaaga aan cidna kaa hoos qaadayn.
Faafin: SomaliTalk.com | Nov 16, 2005